သွားဂျိုးတွေကို လျော့ကျစေပြီး ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုစေမည့် Zingo ပီကေနှင့် ပလုတ်ကျင်းရေ မိတ်ဆက်ပွဲ - Zeekwat Hot News
သွားဂျိုးတွေကို လျော့ကျစေပြီး ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုစေမည့် Zingo ပီကေနှင့် ပလုတ်ကျင်းရေ မိတ်ဆက်ပွဲ
July 3, 20190660
Zingo ပီကေနှင့် ပလုတ်ကျင်းရေ မိတ်ဆက်ပွဲကို ယနေ့ ဂျူလိုင် လ ၃ရက်နေ့ နေ့လည် တွင် Lotte hotel မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲံပပါသည်။
ယနေ့ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေ ရဲ့ 43 % ဟာဆိုရင် ကွမ်းစားတက်တဲံ သူများဖြစ်ကြပါတယ် ။ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တပါးဆိုသလို ခံတွင်း ကျနိ်းမာရေးဟာ ဆိုရင်လည်း အထူးဂရုစိုက်ရမယ့် အရေးကြီးတဲ့ ကျန်းမာရေး ထဲမှာပါပါတယ် .။
အထူးသဖြင့် ကွမ်းစားတက်တဲံ အကျင့်ကြောင့် မိမိရဲ့ ရုပ်ရည် ကို ပျက်စေရုံသာမ က . သွားပေါ်အောင် မရီရဲ စကားမပြောရဲ့ စသည့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မူကိုလည်း လျော့ကျစေမှာပါ ။
ခုတော့ Zingo ကနေ ပီကေ နဲံ ပလုတ်ကျဥိးရေက သင့်ရဲ့ ခံတွင်းကျန်းမာရေးကို ကူညီပေးမှာပါနော် ။ ကွမမ်းစားပီးတဲံ အခါ ခံစားရတက်တဲ့ ခံတွင်းထုံကျဉ်မူတွေ ၊ ကွမ်းဂျိုးတွေအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်ပီး ကွမ်းဂျိုး ၊ ဆေးလိပ်ဂျိုး နှုင့် ကော်ဖီဂျိုး တွေကို ၁၄ ရက်အတွင်း မှာ လျော့ကျသွားနိုင်ပါတယ် ။
ထိရောက်မူပိုရှိစေရန် နှစ်မျိုးလုံးကို တွဲပီး အသုံဲးပုသင့်ပါတယ်တဲံနော် ။ မိဘပြည်သူများ အတွက် ကျန်းမာရေး နဲံ ပတ်သတ်တဲံ အသိပညာပေး အနေနဲံ ZeeKwat မှ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင် ။
အားလုံးပဲ ကျန်ူမာပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀တွေ ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေနော်။
သှားဂြိုးတှကေို လြော့ကစြပွေီး ခံတှငျးကနျြးမာရေးအတှကျ အထောကျအကူပွုစမေညျ့ Zingo ပီကနှေငျ့ ပလုတျကငျြးရေ မိတျဆကျပှဲ
Zingo ပီကနှေငျ့ ပလုတျကငျြးရေ မိတျဆကျပှဲကို ယနေ့ ဂြူလိုငျ လ ၃ရကျနေ့ နလေ့ညျ တှငျ Lotte hotel မှာ ကငျြးပပွုလုပျခဲံပပါသညျ
ယနခေ့တျေ မွနျမာနိုငျငံ လူဦးရေ ရဲ့ 43 % ဟာဆိုရငျ ကှမျးစားတကျတဲံ သူမြားဖွဈကွပါတယျ ။ကနျြးမာခွငျးသညျ လာဘျတပါးဆိုသလို ခံတှငျး ကနြိးမာရေးဟာ ဆိုရငျလညျး အထူးဂရုစိုကျရမယျ့ အရေးကွီးတဲ့ ကနျြးမာရေး ထဲမှာပါပါတယျ .။ အထူးသဖွငျ့ ကှမျးစားတကျတဲံ အကငျြ့ကွောငျ့ မိမိရဲ့ ရုပျရညျ ကို ပကျြစရေုံသာမ က . သှားပျေါအောငျ မရီရဲ စကားမပွောရဲ့ စသညျ့ မိမိကိုယျကို ယုံကွညျမူကိုလညျး လြော့ကစြမှောပါ ။
ခုတော့ Zingo ကနေ ပီကေ နဲံ ပလုတျကြဥိးရကေ သငျ့ရဲ့ ခံတှငျးကနျြးမာရေးကို ကူညီပေးမှာပါနျော ။ ကှမမျးစားပီးတဲံ အခါ ခံစားရတကျတဲ့ ခံတှငျးထုံကဉျြမူတှေ ၊ ကှမျးဂြိုးတှအေတှကျ အထောကျအကူပွုနိုငျမှာဖွဈပီး ကှမျးဂြိုး ၊ ဆေးလိပျဂြိုး နှုငျ့ ကျောဖီဂြိုး တှကေို ၁၄ ရကျအတှငျး မှာ လြော့ကသြှားနိုငျပါတယျ ။ထိရောကျမူပိုရှိစရေနျ နှဈမြိုးလုံးကို တှဲပီး အသုံဲးပုသငျ့ပါတယျတဲံနျော ။ မိဘပွညျသူမြား အတှကျ ကနျြးမာရေး နဲံ ပတျသတျတဲံ အသိပညာပေး အနနေဲံ ZeeKwat မှ တငျပေးလိုကျပါတယျရှငျ ။
အားလုံးပဲ ကနျြူမာပြျောရှငျတဲ့ ဘဝတှေ ပိုငျဆိုငျကွပါစနေျော။
တရုတ်က အသက်အန္တရာယ်ရှိပေမယ့်လူတက်များနေတဲ့ တောင်တက်ခရီးစဉ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…..
ဆုံးပါးသွားခဲ့တဲ့ မိခင်ရဲ့ (၈) နှစ်ပြည့်အတွက် ရည်စူးကာ ကောင်းမှုကုသိုလ်များ ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ခြူးလေး